Mareykanka oo war rasmi ah ka soo saaray hadii Iran ay ku lug lahayd weerarkii Al-Shabaab ee Manda Bay – Hornafrik Media Network
Mareykanka oo war rasmi ah ka soo saaray hadii Iran ay ku lug lahayd weerarkii Al-Shabaab ee Manda Bay
By Liibaan Nuur	 On Jan 6, 2020
Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee AFRICOM ayaa war rasmi ah kasoo saaray tuhunka laga qabo in Iran ay ku lug lahayd weerarkii Al-Shabaab ay shalay subax ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee dalka Kenya.
Weerarkaas ayaa ku soo aaday laba maalin kadib markii Mareykanka ay 3-dii Janaayo dalka Iraq ku dileen Jeneralkii sare ee reer Iran Qassem Soleimani, waxayna Iran ku hanjabtay inay si darran uga aargudan doonto.
Hase yeeshee AFRICOM ayaa sheegay inay qiimeeyeen in weerarkii Manda Bay ee Al-Shabaab uusan wax xiriir ah la lahayn Iran.
“Inkasta oo ku lug lahaanshaha Iran ee weerarkaasi aan la tuhmeyn, hadana AFRICOM waxay la socotaa in dalal kale oo Iran ay ku jirto ay raadinayaan inay saameyn ku yeeshaan Geeska Afrika.” Ayaa lagu yiri qoraal caawa ka soo baxay AFRICOM.
Taliska AFRICOM ayaa shalay xaqiijiyey in saddex qof oo Mareykan ah lagu dilay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Manda Bay ee gobolka Lamu. Seddaxda qof ee la dilay ayaa kala ahaa askari iyo labo qandaraasle, oo laa shaqeynayey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka.
Waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay laba askari oo kale oo Mareykan ah, kuwaas oo xaaladdoodu ay hadda wanaagsan tahay, sida lagu sheegay bayaanka AFRICOM.
Qoyska askariga ku dhintay weerarka ayaa xaqiijiyey in askariga la dilay lagu magacaabi jiray Henry Mayfield, oo ahaa 23 jir.
Henry Mayfield, oo deganaa duleedka magaalada Chicago, ayaa la sheegay inuu ciidanka ku biiray bishii June ee sanadkii 2018-kii.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas ayaa ku tilmaantay mid qeyb ka ah ololeheeda “Qudus Lama Yahuudeynayo”.
Senetor Muuse Suudi: Burcad-badeed ayaan isla dhici weyney burcad Batrool iskama dhici karno
Duqeyn lagu dilay xubno Shabaab ah iyo kuwo kale oo nolosha lagu qabtay